ဦးတိလောက၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
MaleဖျာပုံMalaysia Like0members like this
ဘလော့များ (2)ဆွေးနွေးချက်များအဖွဲ့များဓါတ်ပုံများ (8)Photo Albumsဗွီဒီယိုများ ဦးတိလောက's Likes ဦးတိလောက's ၏မိတ်ဆွေများ
ဦးတိလောက posted photos 1 more…Jan 10Daw Nwe Nwe Win commented on ဦးတိလောက's blog post 'နှလုံးသားဝယ်ဘုရားတည်'"ဆ၇ာတော်၇ဲ.စာမေးပွဲ၇ည်၇ွယ်ချက်ကို သာဓုခေါ်ပါတယ်၇ှင်."Jan 8Nilar Htet Htet Aung liked ဦးတိလောက's blog post 'နှလုံးသားဝယ်ဘုရားတည်'Jan 8padout liked ဦးတိလောက's blog post 'နှလုံးသားဝယ်ဘုရားတည်'Jan 8Soe Min liked ဦးတိလောက's blog post 'နှလုံးသားဝယ်ဘုရားတည်'Jan 7ဦးတိလောက postedablog postနှလုံးသားဝယ်ဘုရားတည်မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) ဆရာတော် ဦးစီးမည့် "နှလုံးသားဝယ် ဘုရားတည်ခြင်း" စာမေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ပထမဆုံးအဖြစ် ပြုလုပ်မည်မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) ဆရာတော် ဦးစီးကျင်းပမည့် "နှလုံးသားဝယ် ဘုရားတည်ခြင်း" စာမေးပွဲကို ၂၀၁၃ ဧပြီလ မနက် ၁၀ နာရီတွင် မှော်ဘီမြို့ရှိ သုဒ္ဓ၀ိပသာနာ ရိပ်သာတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။"ဒီစာမေးပွဲကို ကျင်းပရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဆရာတော်က ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်တွေကို ဘာသာရေးပိုင်းမှာ အားကောင်းလာအောင် ဘာသာစာပေကို မြှင့်တင်တဲ့သဘောပါ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ကိုယ့်ဘာသာ၊ သာသနာကို…See MoreJan72
ဦးတိလောက shared their blog post on Facebookမနက်ဖြန်က ၀ါခေါင်လပြည့်နေ့ (သို.)မေတ္တာခါတော်.နေ.Jan 7ဦးတိလောက and Si Thu are now friendsJan 7ဦးတိလောက posted photos 1 more…Oct 7, 2012မျိုးမင်း commented on ဦးတိလောက's blog post 'မနက်ဖြန်က ၀ါခေါင်လပြည့်နေ့ (သို.)မေတ္တာခါတော်.နေ.'"ခပ်သိမ်းကုန်သော သတ္တဝါ အပေါင်းတို့သည် ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ...စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေ...ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေ...ကျန်းကျန်းမာမာဖြင့် မိမိတို့၏ ခန္ဓာဝန်ကို ရွက်ဆောင်နိုင်ကြပါစေ... မေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံး ရွှင်ပြုံးနိုင်ကြပါစေ... သာဓု...သာဓု...သာဓု...…"Sep 1, 2012မျိုးမင်း liked ဦးတိလောက's blog post 'မနက်ဖြန်က ၀ါခေါင်လပြည့်နေ့ (သို.)မေတ္တာခါတော်.နေ.'Sep 1, 2012yankyaw commented on ဦးတိလောက's blog post 'မနက်ဖြန်က ၀ါခေါင်လပြည့်နေ့ (သို.)မေတ္တာခါတော်.နေ.'"သာဓု.............သာဓု..........................သာဓု ကူးယူခွင့်ပြုပါ အရှင်ဘုရား"Sep 1, 2012ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်) liked ဦးတိလောက's blog post 'မနက်ဖြန်က ၀ါခေါင်လပြည့်နေ့ (သို.)မေတ္တာခါတော်.နေ.'Sep 1, 2012ဦးတိလောက postedablog postမနက်ဖြန်က ၀ါခေါင်လပြည့်နေ့ (သို.)မေတ္တာခါတော်.နေ.မနက်ဖြန်က ၀ါခေါင်လပြည့်နေ့ (သို့) မေတ္တာအခါတော်နေ့…ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဗုဒ္ဓဘာသာကို အခြေခံထားတဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။လအသီးသီးမှာလည်း ဘာသာတရားကို အခြေခံထားတဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်များ ရှိနေပါတယ်။ကဆုန်လပြည့်နေ့ကို ဗုဒ္ဓနေ့၊ ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ကို ဓမ္မစကြာ အခါတော်နေ့စသဖြင့်ဝါခေါင်နေ့ကိုလည်းဝါခေါင်လပြည့်နေ့ (သို့) မေတ္တာအခါတော်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။၀ါခေါင်လပြည့်နေ့ (သို့) မေတ္တာအခါတော်နေ့သတ်မှတ်ခဲ့တာကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ဟောတော်မူတဲ့ မေတ္တာသုတ်ကို အကြောင်းပြုပြီး သတ်မှတ်ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓဟာ ဒီမေတ္တာသုတ်ကို…See MoreSep 1, 2012 2
ဦးတိလောက သည်ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံပြောင်းသွားပါသည်။Aug 22, 2012ဦးတိလောက leftacomment for chitthu@gmail.com"ကောင်းပါတယ်အချင်းချင်းတွေချက်လိုရတာပေါ.ဦးဇင်းgtကlightshil.001ပါvzoကnaythakhin1ပါညတိုင်းထိုင်ပါတယ်နော်ခင်ရင်အပ်ပေးကြပါ"Aug 8, 2012 More... RSS
ဒီဘလော့ကို January 7, 2013 တွင်5:39pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments
မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) ဆရာတော် ဦးစီးမည့် "နှလုံးသားဝယ် ဘုရားတည်ခြင်း" စာမေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ပထမဆုံးအဖြစ် ပြုလုပ်မည်မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) ဆရာတော် ဦးစီးကျင်းပမည့် "နှလုံးသားဝယ် ဘုရားတည်ခြင်း" စာမေးပွဲကို ၂၀၁၃ ဧပြီလ မနက် ၁၀ နာရီတွင် မှော်ဘီမြို့ရှိ သုဒ္ဓ၀ိပသာနာ ရိပ်သာတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။"ဒီစာမေးပွဲကို ကျင်းပရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဆရာတော်က ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်တွေကို ဘာသာရေးပိုင်းမှာ အားကောင်းလာအောင် ဘာသာစာပေကို မြှင့်တင်တဲ့သဘောပါ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ကိုယ့်ဘာသာ၊ သာသနာကို… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... မနက်ဖြန်က ၀ါခေါင်လပြည့်နေ့ (သို.)မေတ္တာခါတော်.နေ.
ဒီဘလော့ကို August 31, 2012 တွင်11:21pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ဟောတော်မူတဲ့ မေတ္တာသုတ်ကို… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ဒီနေရာမှ ဗုဒ္ဓစာပေများတင်ရန်...
5:53pm အချိန်August 6, 2012, တွင်လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကြိုတာနောက်ကျခဲ့သည်ရှိသော် နားလည်ပေးရန်အနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။မိမိမေလ်းထဲမှ သူငယ်ချင်းများကိုဖိတ်ခေါ်ရန်ကိုကလစ်၍ဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်ဘုရားရှိခိုးရန်နေရာဌာနဗုဒ္ဓဘာသာစာကြည့်တိုက်၊ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားများအဖွဲ့၊ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိူးသမီးများအဖွဲ့၊မေတ္တာပို့ရန်နေရာနှင့် (ဗုဒ္ဓကမ္ဘာသာသနာပရဟိတအဖွဲ့ )တို့ကိုလည်းသွားရောက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Top News · Everything မောင်အေးချမ်း commented on အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s blog post 'တောင်ပြာတန်းမှာ ကြွေသောပန်းများ(သို့မဟုတ်)ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက် အသက်စတေး၍ ပေးဆပ်ခဲ့သူများ.. …'"သေမျိုးမို့ သေတာမဆန်းပေမဲ့ သာသနာတော်အတွက် အသက်ပေးခဲ့ရတာမို့ တန်ပါတယ်ဘုရား...တပည့်တော်များက ဒီလိုပဲ…"1 hour agohtunhlaaung liked အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s blog post 'တောင်ပြာတန်းမှာ ကြွေသောပန်းများ(သို့မဟုတ်)ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက် အသက်စတေး၍ ပေးဆပ်ခဲ့သူများ.. …'1 hour agoကိုကျော်သန်း သည်profileကိုပြုပြင်သွားသည်။1 hour agoကလေးတို.ဆရာမ leftacomment for Hla Tun"ကိုလှထွန်းကိုမတွေ.တာကြာလို.ပါ-- ဘယ်ပျောက်နေလဲလို. တွေးနေမိတယ်-- ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဆိုတော့…"2 hours agoကလေးတို.ဆရာမ leftacomment for hla moe 24"ဂျီမေးလ် ရပြီဆိုတော့ မကြာမီ မေးလ်ပို.လိုက်ပါ့မယ်- ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ"2 hours agoကောင်းမြတ်ဇော် သည်profileကိုပြုပြင်သွားသည်။2 hours agoကောင်းမြတ်ဇော် liked အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s blog post 'တောင်ပြာတန်းမှာ ကြွေသောပန်းများ(သို့မဟုတ်)ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက် အသက်စတေး၍ ပေးဆပ်ခဲ့သူများ.. …'2 hours agodimplemit liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post '(၆)ကြိမ်မြောက် အလှူပွဲအတွက် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း'3 hours agohla moe 24 leftacomment for ကလေးတို.ဆရာမ"ဖုန်းလေးဘာလေးဆက်ခွင့်ရမလား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်စရာများရှိလာခဲ့ရင် ဆွေးနွေးရအောင်ပါ
ကလေးတို…"3 hours agoSai pi pi postedadiscussionအရဟံအရဟံအကြောင်းဘယ်နမျိုးရှိပါသလဲ အရှင်ဘုရားSee More3 hours ago 0
မတင်တင်မိုး commented on မူကြိုဆရာ's blog post 'ဘုရားစေတီအချို့ ရှေ့က မနုသီဟ ဖင်နှစ်ခွ အကြောင်းသိကောင်းစရာ'"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။"5 hours agoမတင်တင်မိုး commented on အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post 'မကျေနပ်တဲ့ သံယောဇဉ်'"ဖတ်မှတ်နာယူသွားပါတယ်။"5 hours ago More... RSS